जापानमा ६ दशमलव ६ म्याग्नीच्युडको शक्तिशाली भूकम्प: ८ जनाको मृत्यु, सयौं बेपत्ता ! | Citizen FM 97.5 Mhz
जापानमा ६ दशमलव ६ म्याग्नीच्युडको शक्तिशाली भूकम्प: ८ जनाको मृत्यु, सयौं बेपत्ता !
भदौ २१, एजेन्सी । उत्तरी जापानको होक्काइदो द्वीपमा बिहीबार ६ दशमलव ६ म्याग्नीच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । भूकम्पपछि भवनहरु भत्किएर र भूस्खलनमा ८ जनाकाे मृत्यु हुनुको साथै दर्जनौं बेपत्ता भएको प्रारम्भिक खबर प्राप्त भएको छ ।
गत साता यही क्षेत्रमा आएको शक्तिशाली आँधीमा परेर जनधनको ठूलो क्षति भएको थियो । यस क्षेत्रमा विद्युतसेवा उपलब्ध गराएको प्रमुख थर्मल प्लान्टमा भूकम्पबाट क्षति पुगेका कारण ३० लाख घरमा विद्युत सेवा अबरुद्ध भएको छ ।
यस भूकम्पको केन्द्रविन्दु क्षेत्रीय राजधानी साप्पोरोबाट ६२ किलोमिटर टाढा रहेकाले सुनामीको चेतावनी भने दिइएको छैन । भूकम्पपछि दर्जनौ घरहरु ध्वस्त भएका र भूकम्प प्रभावित इलाकामा रहेका आवासीय दर्जनौं व्यक्तिहरुलाई हेलिकोप्टरको सहयोगबाट उद्धार गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्‌को आकस्मिक बैठकपछि बोल्दै जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले मानिसको ज्यान बचाउन हरसम्भव प्रयास गरिने बताए । सन् २०११ को मार्च ११ मा जापानमा आएको विनाशकारी ९ रेक्टर स्केलको भूकम्पपछिको सुनामीमा जनधनको ठूलो क्षति भएको थियो । रासस
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको पहिलो भेला पोखरामा
‘भावीले जुरायो’ साम्राज्ञी र शारुकको जोडी (भिडियोसहित)